‘नरिसाउ ल नानी’ भनि भनि आधुनिक शैलीमा विभेदलाई निरन्तरता दिइनैपर्छ र? : शिव परियार | Himal Times
Home Flash News ‘नरिसाउ ल नानी’ भनि भनि आधुनिक शैलीमा विभेदलाई निरन्तरता दिइनैपर्छ र? :...
काठमाडौं । गायक शिव परियारले नेपालमा आधुनिक शैलीबाट जातीय विभेदलाई बढावा दिइएको बताएका छन्। विगतको भन्दा विभेदको शैली फेरिएको गायक परियारले उल्लेख गरेका छन्। ‘बा, हजुरबा पुस्तामा ठाडै अपशब्द बचन वचन बोलेर गरेको विभेद मात्रै विभेद थियो । अहिले त माया गरेर बोलेर पो व्यवहार गरेको रहेछ नि, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
‘नरिसाउ ल नानी’ भनि भनि आधुनिक शैलीमा विभेदलाई निरन्तरता दिइनै रहने हो भने यस्तो किसिमको द्वन्द निरन्तर रहने उनले बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेको सामाग्री यस्तो छ: “बिभेदका बिषयमा मेरो कुरा :”
“नरिसाउँ ल नानि,बरु एसो बस्ने अरु सथि खोजिदेउ है,एसो आउँदै गर है” ।
= कामि भन्ने बित्तिकै म झस्कें ।
बा,हजुरबा पुस्तामा ठाडै अपशब्द गालि वचन बोलेर गरेको बिभेद मात्रै बिभेद थियो,अहिले त माया गरेर बोलेर पो ब्यबहार गरेको रहेछ नि, यस्तो नि बिभेद हुन्छ र ? भन्ने पुस्ता एसपटक सामाजिक सन्जालमा धेरै देखिए । यो अहिलेको पुस्ताले चैं बिभेद गर्ने शैलिमा अलिक आधुनिकता भित्र्याएको पाईयो । जस्तै हुन्छ नि माया गरे जस्तो गर्दै बिभेद कायम राख्ने खतरनाक बिभेदको आधुनिक शैलि ।
“गालि गरि गरि घाटि रेटे पनि, अथवा ग्वाम्लाङ्गै अङ्गालो हालेर गालामै च्वाप्प च्वाप्प मोई खाँदै घाटि रेटे पनि परिणाम त आखिर मृत्यु नै हो । तर माया गरेको रैछ नि त, चुम्मा पनि त खाकै रहेछ, तेस्ले घाटि रेटेर मारेको पनि मारेको हो र ? रिसाको, गालि गलौज त्यस्तो केहि गरेको थिएन त, कति राम्रो संग म्वाई खाएर घाँटि रेटेको रहेछ नि, त्यसरि रेटदा पनि मृत्यु हुन्छ र ?
सामाजिक संजालमा यसपालि यहि सोच स्थापित गर्न बिचार प्रस्तुत गर्ने क्रम जारि देखियो । प्रस्तुत बिचार अनुसार जातिय बिभेद गर्ने शैलिमा पनि अहिले यस्तै आधुनिकताबाद छिरेको प्रष्ट भएको छ । हिजो सम्म हामि जातिय बिभेद रहित समता समाजको पक्षमा छौं भन्नेहरुको मुकुण्डो उत्रेको पनि देखियो । उनिहरुले यहि ठान्ने रहेछन कि माया गरेर,मिठो बोलेर गरिने बिभेद बिभेद नै होईन भनेर । मैले माथि भनेनि च्वाप्प च्वाप्प मोई खाएर घाँटि रेटेर मार्ने अपराध होईन भने जस्तै । यस्तो सोच सहित आधुनिक शैलिको जातिय बिभेद कायम राख्न चाहनेहरुलाई रुपा सुनार र सरस्वति प्राधानको यो बिषयले झस्काईदिएको हुन सक्छ ।
अशान्ति भो ,सामजिक सदभाव खल्बलियो, यस्तो के गरेको भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ ” हिजो आफुलाई उच्च जात भनिने पुस्ताले, हिजोको कथित तल्लो जात भनिने पुस्तालाई, बिभेद गर्दा, कथित तल्लो जात बनाईएका पुस्ताले प्रतिबाद या बिरोध गर्न सकेनन । आफु माथि भएको बिभेद सहन बाध्य भए, किनकि उनिहरुलाई कानुन बनाएर हात खुट्टा बाधिएको थियो,अत्यन्तै कमजोर बनाईएको थियो । आफु माथि जबर्जस्ति लादिएको बिभेदको प्रतिबाद गर्न नसक्ने अवस्थामा, बिभेद सहन बाध्य पारिएका बर्गले बिभेद सहिदिएकै कारण समाजमा कथित उच्च बर्गले शान्ति महशुस गरे। किनकि उनिहरुलाई आफ्नो शान्तिको मात्र चिन्ता थियो । आफुलाई उच्च जातको मसिहा मान्नेले बोलि बचन र जुत्ताको नोकले कथित तल्लो बनाईएका जाति माथि प्रहार गरिरहेर आफ्नालागि निर्माण गरेको शान्ति ति जातिय उत्पिडित बर्गलाई त सधै मुर्दा शान्ति झैं महसुश भैरह्यो ।
तर आज समय फेरिएको छ । गाउँ गाउँ, शहर शहरमा धेरै रुपा सुनारहरु छन । उनिहरु छदम भेषि सोचलाई बुझ्न चुक्दैनन । अन्याय सहदैनन बिरोध गर्छन । अनि आज पनि आफु उच्च भई राखेर अरुलाई निचको दर्जामा देखिरहन चाहनेहरुको फेरि टाउँको दुख्न सुरु हुन्छ ।
‘नरिसाउँ ल नानि’ भनि भनि आधुनिक शैलिमा बिभेदलाई निरन्तरता दियि नै रहने हो भने यो बिभेद समाजमा राखिरहेसम्म सरस्वति प्रधान र रुपा सुनार चरित्रको द्वन्द समाजमा जारि नरहला भन्न सकिन्न र त्यो पक्कै पनि नेपालि समाजका लागि हितकर हुने देख्दिन म ।
त्यसैले आमा,बाबा, हजुरआमा हजुरबुवाका अपराध अपराध नै होईन भन्ने कुतर्क छोडेर जातिय समता कायम गर्ने बाटो तर्फ सबै नेपालि लाग्न जरुरि छ किन भने उत्पिडित बर्गले छदम भेषि जातिया समानता खोजेको हैन । राज्य, समाज र ब्यक्तिबाट मान्छेले मान्छेलाई गर्ने समता मुखि ब्यबहार अपेक्षा गरेको हो ।
पहिलो कुरा यो दलित भन्ने शब्द बर्ग वा सम्प्रदाय होईन ।
यो बिभेद अन्त्यकालागि संघर्ष गर्न बनाईएको सांगठनिक मोर्चाको नाम हो । हिजोको दिनमा समाजले पानी चल्दैन है भनेर चरम जातिय बिभेद गरेका नेपालका करिब २० देखि माथि जातहरुको साझा संगठन हो दलित । जातिय बिभेद बिरुद्द जातिय समानता होईन कि जातिय समताको लागि यसको आन्दोलन जारि छ । यहाँ खै किन हो पछिल्लो चरणमा दलित दलित समुदाय भनेर यसलाई जात नै बनाईएको छ यो गलत छ ।
२०६२/६३ पछि बनेको गनतान्त्रीक सरकारले हिजो चरम बिभेद भोगेका दलित,मधेसि, जनजातिलाई बर्ग उथ्थानको लागि आरक्षण ब्यवस्था गरेको हो,समाबेशि हैसियतमा कोटा उपलब्ध गराएको हो । जसमा दलितको जम्मा ९% पर्दछ । तर आफुलाई सर्वहारा जनताको मसिहा ठान्ने सरकारले अहिले त्यो पनि पुर्ण कार्यन्वयन गर्न बन्द गरेको छ ।
हरेक बिभेदको घटनामा एउटा सामन्त बर्गको पिढि सामाजिक संजालमा कोटा खारेज गर, दलित कोटा खारेज गर भनि भनि कुर्लन्छ ।उसको मुख्य टार्गेट नै दलित कोटा खारेज गराउँनु हो । उसले महिला आरक्षण खारेज गर भन्न सक्दैन किनकि महिला आरक्षणका नाममा त ३३ % उसैको बर्गको प्रतिनिधित्व छ । यो बिषयमा बोल्दा उसको आफ्नै बर्गको टाउँको फुट्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, त्यै भएर डराँउछ ।
उसले जनजातिको आरक्षणको बिषयमा त झन बोल्ने कुरै भएन एक नं. प्रदेश नै बन्द हुने सम्भावना भो,
जनजातिहरुहरुसंग भिड्न अलि आँट पुगेन उसको।
अब आयो मधेसि समुदाय अहिले तराईका मधेसि समुदायको आरक्षण कतौटिका बिषयमा उसले चुईक्क बोल्न सक्दैन, किनभने देश नै दुइटा बनाउँछु भन्ने थ्रेट र तराई झर्नै बन्द हुने अवस्था आउंन सक्दछ ।
त्यसैले अब बाँकि को रह्यो भन्दा हिजो चरम जातिय बिभेद गरेर दासत्व स्विकार गर्न बाध्य पारिएका दलित, यिनिहरुलाई पेलेरै ठिक पार्नु पर्छ ,यिनिहरुलाई जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने सोचका साथ दलित कोटा खारेज गर भन्ने अभियानका साथ निशाना साँधिएको छ ।
के २०६२/६३ अगाडि भिभेद थिएन? दलितको कोटा खारेज हुने बित्तिकै सबले समता मुलक आधिकार पाउँछन? जातिय समता सहितको समानता कायम हुन्छ ?
कदापि हुदैन । यो त जातिय रुपमा हिजो दबाईएका,
दलनमा पर्न बाध्य बनाईएका, मान्छे पनि होईन कि चरम जनावर भन्दा पनि निच ब्यबहार खप्न बाध्य पारिएका,
दलितका आजका पुस्ता, जो समाजमा शिक्षित भएर बोल्न थाले, उनिहरुको पनि पहुँच पुग्न थाल्यो, उनिहरु पनि हजुर हजुर गरेर टाउँको निहुर्याएर बोल्नुको सट्टा आँखामा आँखा मिलाएर ब्यबहार गर्न थालेपछि, अहो अब हाम्रो भाग खाने भो, भन्ने डरले फेरि उनिहरुलाई त्यहि दासत्वको जिवन बाँच बाध्य पारिनका लागि सामन्त जहिले पनि कोटा खारेज गर भन्दै छ ।
उस्ले जातिय बिभेद हुनु हुँदैन भन्दैन बरु कोटालाई कोठासंग जोडेर बहस गर्छ यो त्यै सामन्तको पिढि हो जसले हिजो मान्छे लाई मान्छे बन्न नदिएकै कारण आज देशमा यत्रो परिवर्तन भै सक्दा पनि एउट बर्ग हरेक दिन मान्छे हुँ म भनेर आफ्नो अस्तित्व मान्छे भएको संसारलाई बताउँन बाध्य छ ।
आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पतिलाई यदि कसैले आम्दानि गर्नकै लागि सेवाको माध्यम अपनाएर पब्लिक प्लेट्फर्म सम्म लान्छ भने चाहे मिठो बोलेर होस चाहे तितो बोलेर होस त्यँहा जातिय बिभेद गर्न पाईन्दैन ।
Next articleसिस्ने पदमार्गको पहिचान सम्पन्न
डिल्लिबजार कारागारमा झडप हुदा तीन जना घाईते